ह्वातै घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस आजको मूल्य ! - Daily Lokmandu
Homeअन्तर्राष्ट्रियह्वातै घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस आजको मूल्य !
ह्वातै घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस आजको मूल्य !
July 2, 2018 अन्तर्राष्ट्रिय Comments Off on ह्वातै घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस आजको मूल्य !
काठमाडौं : आज साताको दोस्रो दिन सोमबार नेपाली बजारमा प्रतितोला सुनको मूल्य दुई सय रुपैयाँले घटेको छ ।
आइतबार सुन प्रतितोला मूल्य ५७ हजार ५ सय रुयैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर प्रतितोला ५७ हजार ३ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ।
आइतबार तेजावी सुन प्रतितोला ५७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
त्यस्तै, सोमबार प्रतितोला चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार चाँदी प्रतितोला मूल्य ७६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर ७६० रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ ।
दाङ उपत्यका जलमग्न, सबैलाई सतर्क रहन आग्रह
असार १८, दाङ । अविरल वर्षाका कारण दाङको देउखुरी उपत्यका जलमग्न भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आस पासका बस्ती तथा नदी किनारका बस्ती जलमग्न भएका हुन् ।
पानीको निकास नहुँदा घरहरुमा पानी पसेको लमही नगरपालिका वडा नं. ६ खैरी निवासी सुदन खनालले बताए । ‘घरहरुमा पानी पसेको छ’ उनले भने ‘घर भित्रका सामान जोगाउन मुस्किल परेको छ ।’ पानी परिरहेकाले सतर्क रहन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा लालमटियाका सभापति गंगाराम भट्टराईले अनुरोध गरेका छन् ।
‘पानी धेरै परेकाले डुबानको खतरा छ । सबैलाई अनुरोध छ सतर्क रहनुहोस्’ उनले भने ‘सुरक्षित स्थानमा रहन सबैमा अनुरोध छ ।’ दाङ जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने जिल्ला हो ।
राप्ती, बबई र अन्य नदी तथा खोलाका कारण डुबानको खतरा रहेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति दाङले तयार गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका ३५ स्थानलाई बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा राखिएको छ ।
त्यसबाट करिब १ हजार घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने अनुमानसहित उच्च सतर्कता अपनाइएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए ।
‘बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तीन दर्जन वडालाई तोकिएको छ’ उनले भने ‘बाढीको मध्यम जोखिम क्षेत्रहरुमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिकाका नदी आसपासका वडाहरुलाई तोकिएको छ ।’
जिल्लाको भालुवाङ, तुलसीपुरको उरहरी र घोराहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोज उद्धार सामग्रीसहित एक÷एक वटा रवर बोट र खोज उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
साथै पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रकारुपमा बंगलाचुली गाउँपालिकाका र शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ लाई तोकिएको सूचना व्यवस्थापन अधिकृत दाहालले जानकारी दिए ।
पहिरोको मध्यम जोखिम क्षेत्रका रुपमा बबई गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३, बंगलाचुुली गाउँपालिका वडा नम्बर १,२ र ८, तथा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ रहेका छन् ।
दाङमा राप्ती नदिले चारवटा स्थानीय तहहरु राजपुर, गढवा, राप्ती र लमही नगरपालिकाका दुई दर्जन वडालाई प्रभावित बनाउने देखिएको छ ।
४ वटा स्थानीय तहका अधिकांश वडामा बाढी पस्यो भने एक हजार घरधुरी प्रभावित हुनेछ भने ५ हजार जनसंख्यालाई असर पर्ने देखिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
बाढीले नवलपरासीमा १७० घर डुबानमा, सडकसमेत बगायो
बाढीको बबण्डर : भेलले बगाउँदा बाँकेमा चार जनाको मृत्यु
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,412)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,198)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,186)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (1,061)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (656)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (647)
अब त तिमिलाई भेट्न पनि, अरु कसैको अनुमती चाहिन्छ मलाई…सबैले एकपटक… (9,834)